Vono olona tany Betroka :: Mpivady maty voafira famaky tao an-tranony • AoRaha
Vono olona tany Betroka Mpivady maty voafira famaky tao an-tranony
Mampivarahon­tsana ny fomba nahafatesan’ny mpivady iray, manodidina ny 40 taona, tany Mahatalaky Betroka. Nisy namono tao an-tranony izy ireo, tamin’ny alin’ny alarobia tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany.
“Voakapa sy voatetitetika tamin’ny famaky ny vatan’izy mivady”, araka ny fizahana nataon’ny mpitandro filaminana niaraka tamin’ny mpitsabo. Efa voasambotry ny zandary ny olona ahiana fatratra tamin’ io vono olona io, izay voalaza fa anadahin’ilay vehivavy maty.
Ny vatana mangatsia­kan’ireo mpivady nihoson-dra tao an-trano no novan­tanin’ ny fokonolona sy ny zandary, taorian’ny fahenoana hiakiaka sy antso vonjy. Teo no ho eo ihany dia notadiavina ny olona nahavanon-doza. Voasam­botra ny anadahin’ilay renim-pianakaviana, tokony ho tamin’ny 2 ora maraina.
“Tsy nisy fifamaliana sy fifandirana, tamin’io alina io, fa avy hatrany dia nokapakapain’ilay lehilahy tamin’ny famaky iretsy havany. Toy ny mamon-drongony ilay namono ka izany no niteraka ny hevi-dra­tsiny. Tsy hita kosa ny zazalahikely iray, amam-bolana, voalaza fa nentiny nanaraka azy, taorian’ny herisetra nataony”, hoy ny zandary any Betroka.
Fantatra, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana fa tao an-trano, tamin’ny fotoana nisehoan’ny famo­noana, ny zaza telo miana­dahy, zanak’izy mpivady. “Niafina sy nahita ny zava-niseho rehetra ireo zaza roa sady nahita ny nitondrana ny zandrin’izy ireo. Ny fitantaran’ ireo ankizy roa ireo no nahafan­tarana an’ilay namono”, hoy ny loharanom-baovao iray. Voatazona ao amin’ny borigadin’ny Zandarimaria any Betroka iry lehilahy voarohirohy. Natao famoto­rana izy, hatramin’ny omaly hariva, nanontaniana ny toe­rana nitondrany an’ilay zaza, zanak’izy mivady novonoiny.
Miralenta :: Mitaky ny fanajana ara-drariny ny zony ireo vehivavy sembana
Tranga tany Betroka :: Karohina ny zazakely zanak’ izy mivady nisy namono